सिन्डिकेट संसार :: Press Chautari ::
राजनीतिक तदर्थवादमा चलेको नेपाल अहिले सेनेसी अर्थात् सेटिंग, नेटवर्किग र सिन्डिकेट फोवियाबाट ग्रस्त छ । थेसिसको हैन, एन्टी थेसिसको यो जमानामा यो कहाँ छ भन्दा पनि कहाँ छैन भन्नु उपयुक्त होला । इमान्दारलाई बेइमान बनाएर प्रणालीको चितामा मुलुकको स्वार्थ स्वाहा पार्ने यो ब्ल्याक लाइले नै अहिले मुलुकमा शासन गरिरहेको छ । जो शासक हौं भन्ने सोचिरहेका छन्, ती त सेनेसीका कमजोर कडी मात्र हुन् ।
एक दिन भीष्म पितामहले जेठा पाण्डव युधिष्ठिरलाई संसारमा पापी मान्छे खोज्न भने । पितामहको आदेश भुँइमा खस्न नपाउँदै उनी पनि त्यस्तो मान्छेको खोजीमा निस्के । वर्षौ बित्यो तर उनले एकजना पनि पापी मान्छे भेट्न सकेनन् । अन्तमा हार मानेर पितामहसामु उभिएर युधिष्ठिरले भने, पितामह माफ पाउँ मैले एकजना पनि पापी मान्छे भेट्न सकिन । भीष्मले उनको अनुहारमा हेर्दै भने, तिमीले द्रौपदीको वस्त्रहरण गर्ने दुस्साहसनलाई पनि पापी देखेनौं ? युधिष्ठिरले जवाफमा भने, उसले पनि त्यो काम पाप हो भन्ने लागेको भए शायद गर्दैनथ्यो होला । युधिष्ठिरको जवाफ सुनेर भीष्म पितामहले भने, तिमी साँच्चैको धर्मराज हौं ।
यही कहावतको आधारमा हुनुपर्छ, चलनचल्तीमा एउटा भनाइ बहुचर्चित छ, आफू भलो त जगत भलो । यसलाई अलि सामान्य गर्दै भन्ने गरिन्छ, आफू जस्तो छ, अरुलाई पनि त्यस्तै देखिन्छ । यसैलाई अर्को आयामबाट नाप्ने क्रममा सुन्दरताको परिभाषा दिदा यस्तो पनि भन्ने गरिन्छ, सुन्दरता सुन्दर वस्तुमा हुँदैन, हेर्ने आँखा र बुझ्ने मनमा हुन्छ ।
शायद, यही पृष्ठभूमीमा रहेर हुनुपर्छ, कवि दुर्गालाल श्रेष्ठले एउटा गीत लेखे :
संगीतकार न्हू बज्राचार्यले मन्त्रगायिका आनी छोइंगका लागि त्यही सोच र कोणको संगीत जुराइ दिए । आनीले पनि त्यही स्केलमा भाती पुर्याएर गाइन् । मन्त्र अन्ततः गीत बन्यो र जो कोहीको पनि ओठओठमा भुण्डियो, फूलको आँखामा फूलै संसार ।
हुँदा हुँदा सर्वसाधारणले पनि आफू भलो त जगत भलो मात्र हैन, आफू जस्तो छ, अरुलाई पनि त्यस्तै देखिन्छ समेत भन्न छोडे । सट्टामा उनीहरुले पनि सकारात्मक कुराको हकमा फूलको आँखामा फूलै संसार भन्न थाले भने नकारात्मक अर्थमा काँडाको आँखामा काँडै संसार । यसरी नेपाली समाजमा फूल र काँडाको संसारले विम्व र प्रतीकका रुपमै झाँगिने मौका पायो ।
प्रसंग, वर्तमान नेपालको हो । अहिले नेपालमा या त नेटवर्किंग छ या सेटिंग । यी दुबैको चलखेलमा बनेको हुन्छ, सिन्डिकेट । साँच्चै भन्ने हो भने पहिला पनि यही सिन्डिकेटले चल्थ्यो नेपाल, अहिले पनि त्यसैले चलाइरहेको छ । केही ठाउँ र भूमिकामा पात्रहरुको हेरफेर भएको छ, त्यो बेग्लै कुरा हो । त्यसले तात्विक असर पार्ने पनि हैन । नयाँ भनिएको नेपालको पछिल्लो परिदृश्यले त्यही कुराको साक्षी बकिरहेको छ ।
सिन्डिकेट पर्दा पछाडिको भर्चुअल मैदानमा हुने शक्तिको खेल हो । यसका खेलाडी भनेका पावर ब्रोकरहरु हुन् । पावरको मात्रा फरक हुने अर्थमा तिनीहरुको खेल मैदान निश्चित हुन्छ । यो पनि एउटा पेशा नै हो । र, यिनीहरुको संख्या खासै ठूलो पनि हुदैन । जो आए पनि वल्ला घरको नरे पल्लो घरमा सरेजस्तै मौसमी चरित्रका हुन्छन् यिनीहरु । उनीहरुको मूल काम भनेकै सत्ताको कमजोर कडी पत्ता लगाउने र त्यसमाथि आफ्नो पल्ला भारी राख्न आवश्यक तिक्डमको जोहो गर्ने हो । जसलाई उनीहरु सेटिंग मिलाउने भन्छन् । जब तिनीहरु सेटिंग मिलाउन सफल हुन्छन्, त्यसपछि सत्तालाई मोहरा बनाएर आफ्नो स्वार्थी खेल खेल्छन् । उनीहरु आफूलाई फाइदा हुने छ भने जे गर्न पनि तयार हुन्छन् । लाखमा इमान बेच्छन्, करोडमा स्वाभिमान बेच्छन् र अर्बमा त आफूलाई पनि बेच्छन् । किनकि, उनीहरुको पेशा नै इमान्दारलाई बेइमान बनाउने हो । प्रणाली पोलेर खरानी बनाउने र त्यसैको विगुत बाँडेर लुट्ने लुटाउने हो । पहिला पनि मुलुक यही खेलमा थियो, अहिले पनि मुलुक त्यही खेलमा छ ।
संजोगवस्, अस्ति एउटा यस्तै खालमा पुगियो । उनीहरु त्यहाँ बोलकबोल लगाउँदै थिएँ, तीन करोड भए मुख्य सचिवलाई हटाउन सकिन्छ । पाँच करोड भए फलानो मन्त्रीलाई हटाउन सकिन्छ । जाबो सचिव त्यो त ५० लाखदेखि नै सुरु हुन्छ । कमाउ ठाउँ र पदहरुमा पनि उनीहरु बोल कबोल लगाउँदै थिए, फलानोलाई भन्यो, सुशील दा जे पनि गर्छन् । ढिस्कानालाई मिलायो, ओली कमरेड जे पनि गर्छन् आदि इत्यादि । उनीहरुको कुरा सुन्दा यस्तो लाग्थ्यो, ती सबै शक्तिशाली मानिसहरु त मात्र बुख्याँचा हुन् । उनीहरुले चाहे भने बारीमा राख्छन्, नचाहँदा हटाउँछन् ।
झट्ट सुन्दा हावादारी गफजस्ता लाग्छन् यी कुरा । मानिसहरु जिब्रो काढ्दै भन्छन्, यस्तो पनि हुन्छ र ? तर, यथार्थमा पछिल्लो समय ठेक्का पट्टा, कोटेसन, सरुवा, बढुवा, नियुक्ति अधिकांश बोल कबोलमा हो कि जस्तो देखिन्छ । किनकि, कुन पदका लागि के भन्ने पनि छैन । सोच्दै नसोचेका मानिसहरु सोच्दै नसोचेका पदमा पुग्छन् । अरु त अरु संविधानसभा सदस्यका लागि पनि यस्तै मोलतोल भएको कुरा आयो । सेटिंग मिलाउन सके यहाँ नहुने कुरै केही छैन ।
यतिबेला प्रणाली सखाप पारेर तदर्थवाद हाबी बनेको अवस्थामा छ मुलुक । यही नै यस्ता फौबन्जारहरुको लागि रामराज्य हो । उनीहरु यस्तो अवस्था सिर्जना गर्न र यस्तो अवस्था तन्काउन न्वारानदेखिकै बल लगाइरहेका छन् यतिबेला । दल फुटाउनदेखि, संविधान बन्न नदिने अवस्था सिर्जना गर्नसम्मका लागि प्रत्यक्ष परोक्ष लगानी गरिरहेका छन् उनीहरु । लोभी पापीहरु नै पदमा पुगेका बेला यिनीहरुलाई यो मौसम पनि राम्ररी नै फापेको छ ।
सत्ता राजनीतिको मात्रै कुरा हैन । मिडियामा समाचार छाप्ने र नछाप्नेसम्ममा पनि सेटिंग हुन्छ । कुन पत्रिकामा कसलाई सम्पादक बनाउनेदेखि कसकी श्रीमती या छोरीलाई कहाँ जागिर लगाइदियो भने मिडियाको गुड बुकमा पर्न सकिन्छ या मिडिया डार्लिंग हुन सकिन्छ, त्यसको सम्म हिसावकिताव गरिन्छ यहाँ । त्यसका लागि कुन मिडिया मालिकको कमजोरी के हो ? कुन सम्पादकको कमजोरी के हो ? त्यो पत्ता लगाइन्छ । अनि त्यसैको आधारमा पर्दा पछाडि सेटिंग हुन्छ । कतिपय कलेजमा मिडियामा काम गर्नेलाई विषय नमिले पनि पढाउन दिइन्छ । यो पनि त्यही सेटिंगको सानो उदाहरण हो । राष्ट् बैकका निर्देशकका साली छन् भने अहिलेका बैंकमा जागीर पक्का छ । किनकि, बैंकको पक्षमा निर्णय गराउन योभन्दा ठूलो सेटिंग केही हुँदैन । उदाहरण खोज्न टाढा जानै पर्दैन, नेपाल राष्ट् बैंकका डेपुटी गर्भनरको बहिनी ज्वाइँ भएकै कारणले एकजनालाई बैंकको सीईओ फालाफाल छ । यस्ता सेटिग हरेक ठाउँमा छन् ।
भनिन्छ, अहिलेको समय थेसिसको हैन, एन्टी थेसिसको हो । के हो भन्दा पनि के हैन ? भन्ने जमाना हो यो । यसैलाई विकासबादका प्रणेता डार्बिनले एन्टी थेसिस भनेका छन् । सेटिंगमा पनि यो कुरा लागू हुन्छ? अर्थात् सेटिंग के हो भन्दा पनि सेटिंग के हैन भन्ने जमाना हो यो । जति राम्रो विचार लेख्नुहोस्, नाम चलेका पत्रिकाको प्रकाशक या सम्पादकको सिन्डिकेटमा हुनुहुन्न भने तपाईको लेख छापिदैन । जतिसुकै राम्रो बैंकर हुनुहोस्, नेपाल राष्ट् बैंक र बैंकरहरुको सेटिंगमा पर्नुभएन भने तपाई कही टिक्नुहुन्न । तपाई जतिसुकै राम्रो एमाले हुनुहोस्, गुटगत सेटिंगमा पर्नुभएन भने कौडीको भाउमा पर्नुहुन्न तपाई । यस्तो समस्या कहाँ छ ? भन्दा पनि कहाँ छैन? भन्ने एन्टी थेसिसको जमाना हो यो । सिन्डिकेट कहाँ छ भन्दा पनि कहाँ छैन भन्ने समय हो यो । त्यसैले सेनेसी अर्थात् सेटिंग, नेटवर्किग र सिन्डिकेट आज नेपाली जनजीवनको एक हिस्सा बनेको छ ।
के सेनेसी अर्थात् सेटिंग, नेटवर्किग र सिन्डिकेटको जालोबाट नेपाललाई मुक्त बनाउन सम्भव छ ? राम्रा हैन, हाम्रा भन्ने सोचमा रमाइरहेको नेपाल यति सजिलै यो कब्जाबाट मुक्त होला भन्न गाह्रो छ । अहिलेलाई यति भन्न सकिन्छ, आशा गरौं भरचाँहि नगरौं ।
घुम्दै फिर्दै रुम्जाटार भनेझैं फेरि कुरा फूलै संसारमा आऔं । नेपालको यो पछिल्लो चित्र र चरित्रका बारेमा थाहा पाएपछि भए कवि दुर्गालालको गीतको स्थायी कस्तो हुन्थ्यो होला ? फूलको आँखामा फूलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार मात्र हुन्थ्यो कि ? त्यसमा उनले अरु पनि केही थप्थे होला ? मनमा थरिथरिका विचार प्रवाह भैरहेको बेला यो स्तम्भकारलाई लाग्यो, शायद उनले यस्तो पनि थप्थे होला,
सेटिंगको भाकामा सिन्डिकेट संसार
आगे, उनीहरु नै जानुन् ।
सोमवार, २०७१ मंसिर १५ गते २२:०४ / Monday, Dec 01, 2014 10:04 pm